आज महाअष्टमी : शक्तिपीठहरुमा बलि चढाइँदै, दुर्गा भवानीको विशेष पूजा यसरी गरिँदै ! - Nepalese Times
माओवादीले तोक्यो ३२ विभागका प्रमुख, कुन विभागको जिम्मेवारी कसलाई ? (सूचीसहित) 32 मिनेट अघि
आज महाअष्टमी : शक्तिपीठहरुमा बलि चढाइँदै, दुर्गा भवानीको विशेष पूजा यसरी गरिँदै !
नेप्लिज संवाददाता २७ आश्विन २०७८, बुधबार ०८:०० (1 हप्ता अघि) १४८ जनाले पढ़िसके
विवेकशील र अविवेकशील प्राणी दुवैले मोक्ष प्राप्तिको चाहना गर्ने हुनाले देवमन्दिर र यज्ञ यज्ञादिमा विधिपूर्वक बलि दिनाले ती पशुले मोक्ष प्राप्त गरी माथिल्लो योनीमा जन्म लिने कुरा शास्त्रमा वर्णन गरिएको धर्मशास्त्रविद् एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका पूर्वअध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र गौतमले बताए ।
“राज्य सञ्चालकले त प्रभु शक्ति, मन्त्र शक्ति र उत्साह शक्तिका लागि पशुबलि विधिपूर्वक दिनैपर्छ भन्ने शास्त्रीय वचन छ”, उनले भने । यी तीनवटा शक्ति दुर्गा भवानीबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसै कारण आजको दिन विधिपूर्वक पशुबलि दिइने गरिएको हो । आजैका दिन राति कालरात्रिका रूपमा पशु बलिको विधि र पूजा आरधनासहित मनाउने गरिन्छ । कालरात्रिको पूजा विधि र सङ्कल्पसमेत छुट्टै हुने भएकाले यसको विशेष महत्व छ । ब्राह्मणले भने कालरात्रि पूजा पनि गर्न नपर्ने विधान छ ।